I-Altea, eduze nolwandle, enengadi yangasese
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Paula
Indlu enengadi ilungele imibhangqwana, abangani nemindeni
Okusanda kubuyiselwa ngesitayela saseMedithera
Ikhululekile futhi ihlome ngokugcwele
Ibanga elihamba imizuzu emibili kuphela ukusuka olwandle
I-La Casa del Agua itholakala engxenyeni engezansi yeDolobha Elidala lase-Altea, uhambo lwemizuzu emi-2 ukusuka ogwini, nokuhamba ngezinyawo okungaphansi kwemizuzu eyi-10 ukusuka kuzo zonke izindawo ezithakazelisayo (izindawo zokudlela, izitolo, amabha ...). Sithole le ndlu yomdobi endala futhi siyibuyisele ngentshiseko nokunakekelwa okukhulu ngesitayela saseMedithera, enezikhala ezivulekile, ezikhanyayo nezibanzi, kanye ne-patio emnandi yokuphumula futhi ujabulele iholide lakho kwelinye lamadolobhana amahle kakhulu eSpain.
Indlu ihlukene kabili. Esitezi esiphezulu, kukhona igumbi lokuphumula, amakamelo okulala amabili abanzi kakhulu futhi akhanyayo (elinye lawo linovulandi), ikhishi elihlome ngokuphelele elivulekele indawo yokuhlala, kanye negumbi lokugezela eligcwele elineshawa enkulu. Esitezi esingaphansi, uzothola indlu yangasese, indawo encane epholile ebizwa ngokuthi "indawo engcwele" kanye nenkanyezi yendlu: ingadi yangasese :)
Indawo yinhle: eduze kolwandle, kodwa ngaphakathi kweDolobha Elidala futhi ifinyeleleka ngemoto. Kunezindawo zokupaka zamahhala ezimbalwa eduze futhi, uma unquma ukusebenzisa izinto zokuhamba zomphakathi, ithilamu namabhasi ambalwa kusele imizuzu embalwa nje.
Izinto ezimbili ezikhangayo e-Altea yiDolobha Elidala nolwandle. Futhi indlu yethu isendaweni ekahle ukusebenzisa ithuba lakho kokubili njengoba ihlezi onqenqemeni lweDolobha Elidala futhi ingaphansi kohambo lwemizuzu emibili ukuya olwandle. Kuhlala kunethuba lokuhambahamba eduze kwe-promenade yolwandle noma ukuya ogwini. Lokhu sikujabulela kakhulu emini njengoba senza ebusuku kakhulu. Cishe yonke indawo lapho ubheka khona kukhona ukubukwa kolwandle nezintaba; futhi le mibono isho okuncane, iyamangaza! Cishe kunezinketho ezingenamkhawulo zezindawo zokudlela, amathilomu nezitolo zezipho ezisabalele kulo lonke idolobhana kanye eduze kwendlela yokuhamba. Indawo yabahamba ngezinyawo kanye nebhayisikili (ukuqashwa kwamabhayisikili kuyatholakala) kuyafaneleka.
Hamba ngomnyango ongaphambili we-La Casa del Agua bese ungena edolobheni elidala. Idolobha Elidala lase-Altea ngeke libe indawo ozoya kuyo; kunalokho kuzoba indawo ozobe uhlala kuyo. Iningi lomakhelwane bakho kuzoba abantu bendawo kanye nabafokazi abambalwa abathola i-Altea futhi bayenze ikhaya labo lesibili. Zama ngayo yonke indlela engingeke ngikwazi ukukuchaza noma ukukuqonda ukuthi abantu base-Altea banobungane futhi bavuleleke kangakanani.
Uma usidinga, sizotholakala ngocingo, i-imeyili noma umlayezo.
Inombolo yepholisi: VT-461620-A